iPod Touch 3.1.2 Firmware jailbreak guide [Burmese] | R Blog..!
iPod Touch 3.1.2 Firmware jailbreak guide [Burmese]
iPod Touch Jailbreaking ULTIMATE Guide [In Burmese]
My new iPod Touch + A little review
Portable applications for iPods
Author: Rapster88	Categories: Hack, Tips Tricks and Tweaks, iPod	Tags: Comments (12)
October 23rd, 2009 at 06:43	| #1
အစ်ကိုရေ အစ်ကိုပြောသလို Make it rain ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ပါတယ်..
ပြီးတော့ iPod က restore တွေဘာတွေတောင်းတော့ပေးလိုက်တယ်…
ပြန်တက်လာတော့ ဘာမှမတွေ.ဘူးဗျ… ဘာလိုနေလဲမသိဘူး..
ကူညီပါအုံးဗျာ.. အခုမှ Ipod 2G လေးဝယ်ထားတာ… ဘာမှမသုံးတတ်ဘူးဖြစ်နေလို.ပါ..
Cydia ဆိုတာလိုနေတာလားမသိဘူးခင်ဗျ.. အဲဒါ ဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတာလေးပြောပေးပါအုံး…
October 23rd, 2009 at 09:20	| #2
iPod ကုို iTunes သုံပြီး နောက်ဆုံး firmware (3.1.2) တင်ပြီးပြီလားဗျ။ ပုံမှန်ဆိုရင် make it rain လုပ်ပြီးရင် restore လုပ်ဖို့ မလိုဘူးလေ။ အဲဒါ တစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါဦး။
October 23rd, 2009 at 19:08	| #3
ဟုတ်ကဲ့ဗျ firmware (3.1.2)ကတော့ ဟုတ်ပါတယ်…restore မလုပ်ရင် သုံးလို.မရတော့ဘူးဗျ.. ဘာမှကိုမပေါ်တော့တာ.. အကုန်ပျောက်ကုန်တာဗျ.. JB လုပ်လိုက်တာနဲ. အသစ်အတိုင်းဖြစ်သွားရောဗျ..
October 23rd, 2009 at 20:06	| #4
အစ်ကုို အဲဒီ iPod ကုို ဘယ်တုန်းက ၀ယ်ထားတာလဲဗျ။ စစချင်း ၀ယ်တုန်းကရော ဘယ် firmware နဲ့ ပါလာလဲ ? ကျွန်တော်သိသလောက် ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာလ နောက်ပိုင်း ထွက်တဲ့ iPod နဲ့ iPhone တွေကုို Apple က fix လုပ်ထားတယ်လို့ကြားတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အခုနည်းနဲ့ Jailbreak လုပ်လို့မရဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
October 24th, 2009 at 02:17	| #5
ဟုတ်မယ်ဗျ ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာက တစ်လလောက်ပဲရှိသေးတယ်… အင်း… JB လုပ်လို.မရဘူးဆိုလဲ မလုပ်သေးဘူးဗျာ.. ဘာမှလဲ သိပ်မသုံးတတ်သေးပါဘူး.. ကျွန်တော်က PDF ဖိုင်တို… Dictionaries တွေဘာတွေ ထည့်ချင်တာ…တစ်ခြားနည်းရှိရင်ပြောပါအုံးဗျာ… အခုလိုဖြေပေးတာကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
October 25th, 2009 at 03:00	| #6
@စိုင်းအောင် ကျွန်တော် အခုပဲ နောက်တစ်ခါ ထပ် JB လုပ်ကြည့်တယ်။ အစ်ကုို make it rain နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျ iPod ပေါ်မှာ ဘာပြလဲဗျ? Geohot ရဲ့ ပုံကုို ပြနေတုန်းမှာ iTunes က restore လုပ်ဖို့တောင်းနေရင် restore မလုပ်ပဲ iTunes ကုိုပဲ ပိတ်လိုက်ပါ။ iPod က ခဏနေရင် သူ့ဟာသူ ပြန်ပြီး reboot ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ထပ်စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေစေ။
October 25th, 2009 at 08:22	| #7
အင်းဗျာ.. ပုံကတော့ Geohot ပုံပေါ်တယ်ဗျ.. အဲဒါပေါ်ပြီးတာနဲ. Restore တောင်းတယ်လေ
ကို Rapster88 ပြောသလိုပဲ Restore မပေးပဲ itunes ပိတ်လိုက်တယ်ဗျ.. ipod ကပိတ်သွားတယ် reboot မဟုတ်ဘူးဗျ.. shutdown ကျသွားတာ.. ပြန်တက်မလာဘူး…ပြန်ဖွင့်တော့ ဘာမှမပေါ်ဘူး iTunes နဲ.ပြန်ဖွင့်တယ် restore ပေးမှရမယ်ဆိုတော့ ပေးလိုက်ရပြန်ရော..
ဒီလိုပဲ မကျေနပ်ဘူးထပ်လုပ်တယ်.. နောက်တစ်ခါတော့ ကြိုးတွေပါ အကုန်ဖြုတ်ပစ်တာဗျ… အဲဒီမှာ ထူးခြားတာကတော့ restore ပေးတာ error တက်သွားတယ်ဗျာ.. ဘာမှကိုတက်မလာတော့တာဗျ.. computer ပါ restart တွေဘာတွေချ ipod ကတော့ မရသေးဘူး…. တစ်ခြားကွန်ပျူတာမှာ သွားလုပ်ရင် အဆင်ပြေမလားဗျ.. ဒါမျိုးဖြစ်ပြီး ပျက်တာတွေဘာတွေရှိလား…. itunes နဲ.လဲ ချိတ်လို.မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်.. ဆက်လုပ်လိုက်ပါအုံးမယ်ဗျို. ဘာပဲပြောပြော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော့်..
October 26th, 2009 at 17:46	| #8
အစ်ကိုရေ လုပ်လို့တော့ ရသွားတယ် ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မိမှန်းကိုမသိဘူး အဲ နောက်တော့ install လုပ်လိုက်တာ reboot drive ပေါ်လာလို့ နှိပ်လိုက်တာ..လုံးဝကို ပြန်မတက်တော့ဘူး…
အဲဒါနဲ့ ပြန် restore လုပ်ရပြန်ရော….ပြန်လုပ်ပြီး ထပ်လုပ်တော့ သူ့ပုံကြီးပေါ်နေပြီး ဘာမှကိုမဖြစ်တော့ဘူး
running လို့တော့ pc ပေါ်က rain မှာပြနေတယ်…ဆက်မတက်တော့ဘူး…
လုပ်ပါအုံး ဘာဖြစ်တာလဲ ဟင်…
October 26th, 2009 at 18:08	| #9
@bluespider What’s your iPod model? If its 3G iPod Touch, you’ll need to use blackra1n to help your ipod boot. Its called tethering jailbreak. You’ll have to use it until those guys come out with another better jailbreak.
November 2nd, 2009 at 12:02	| #10
ကျနော်က iphone 3GS Firmware3.1.2 ကိုင်ပါတယ်။ ကျနော် blackra1n ကိုသုံးတာ install လုပ်လို့ရပါတယ်။
cydia လည်းပေါ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ phone ကို restart လုပ်လိုက်တာနဲ့ recovery mode ပြန်ရောက်သွားပြီးဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ restore ပြန်လုပ်ပြီး ထပ်လုပ်ကြည့်တော့လည်း
ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါအုံးနော်။ cydia က function တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်။ restart ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ restore ပြန်လုပ်ရတာတော်တော်တောင်များနေပြီ… ဟီး…
restore ခဏခဏလုပ်တာ phone ကိုထိခိုက်နိုင်ပါသလားဆိုတာလေးလည်းမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
November 12th, 2009 at 10:40	| #11
blackra1n jailbreak detail in there http://www.macforus.com/?p=36&lang=my-my .
November 24th, 2009 at 23:47	| #12
iPhone ရဲ့firmware 3.1.2 ကိုiTune က နေdownload မလုပ်ဘဲ့ တခြားsite လုပ်ပြီး iPhone ကို upgrade ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
myanmar ပြည်မှာ connection မကောင်းလို့ ပါ။
January 10th, 2010 at 20:46	| #1
Saturngod» Blog Archive » Ornagai in iPhone / iPodTouch	February 28th, 2010 at 07:07	| #2
Announcement | R Blog	Name (required)
What I’ve been up lately
MagSafe really saved the day